🥇 ▷ OnePlus 7T iyo 7T Pro: faahfaahin cusub ayaa soo baxday iyo xirmada iibka ✅
OnePlus 7T iyo 7T Pro: faahfaahin cusub ayaa soo baxday iyo xirmada iibka
Kaliya maalmo yar ayaa laga joogaa kahor soo bandhigista rasmiga ah ee OnePlus ee cusub ee India. Maanta, ma jiraan faahfaahin dheeraad ah oo farsamo oo soo baxday oo ku saabsan labada telefoon ee soosocda ee xigta, iyaga oo raba inay ogaadaan? Si kastaba ha noqotee, inkasta oo faahfaahinta qurxinta hadda la yaqaanay, waxaa la gaadhay waqtigii la baari lahaa qayb qalabka ka mid ah.
Sidoo kale aqri: OnePlus 7T Series: taariikhda rasmiga ah ee la bilaabay!
HALKAN 7T iyo 7T PRO: SHARAXADA CARRUURTA CUSUB
Faahfaahinta ugu horreysa ee soo baxday waxay la xiriirtaa faahfaahinta astaamaha xusuusta gudaha, OnePlus 7T waxaa lagu iibin doonaa 8/128 GB iyo 8/256 GB oo cabbir ah. Xal u helista Pro kala beddelashada halkii, waxay la mid noqon doontaa 8 / 256GB iyo 12/256 GB.
Waqtiga dib loo eegi karo dhawr waxyaabood (7T):
– Glacier buluug & Qalin barafaysan
-6.55 “90hz 2400x1080p 20: 9 Tall Display, 2K wuxuu ahaa jahwareer.
– Dacwadda Warp 30T Waxaa lagu taageeray 7T non-Pro
-Diyaarada: 161 × 74.4 × 8.1mm
Waxaan u malaynayaa inaad hadda uun ku faraxday qiimaha hadda!# OnePlus7T https://t.co/4ZJ25c3jaj
– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) Sebtember 23, 2019
Sidoo kale aqri: Naqshadda OnePlus 7T? Pete Lau ayaa ka fikiraya arrintaas
Faahfaahin dheeraad ah ayaa soo baxday oo ku saabsan bandhigga OnePlus 7T! Dambe wuxuu lahaan doonaa 6.55-inji AMOLED ah oo ah Full HD + oo leh 90Hz xarago ah, laakiin kuwani maahan wararka keliya. Sida ay sheegayaan wararka xanta ah ee ilaa iyo haatan soo baxay, kala duwanaanta aasaasiga ah ee OnePlus 7T waxay dhabarka ku lahaan doontaa kamarad wareeg saddex-gees ah, waa sheeko muhiim ah marka loo eego qaabeynta, taasoo ka duwanaan doonta wixii aan illaa hadda aragnay.
Midabada la heli karo waxay noqon doonaan labo, oo kala ah: Glacier Buluuga ah iyo Qalinka Dareenka ah.
Sidoo kale aqri: OnePlus 7T iyo 7T Pro: xaqiijinta cusub ee kala duwanaanshahooda
Xirmooyinka iibka taleefannada casriga ah ayaa sidoo kale ka dhex muuqday daadadka wararka. THEMuuqaalka wuxuu ka yimid maamulaha guud ee OnePlus (Pete Lau) oo ku shaaciyay muuqaalkiisa rasmiga ah ee Twitter.
Casaan iyo geesinimo, soo noqoshada muuqaalka muuqaalka OnePlus One. # OnePlus7T pic.twitter.com/S08hiU563P
– Pete Lau (@PeteLau) Sebtember 23, 2019
Kaliya waa inaan sugnaa 10-ka Oktoobar si rasmi ah looga bilaabo Yurub.